~ ဏီလင်းညို ~: တစ်ဖက်သော စာမျက်နှာ....
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 6:33 AM
နွယ်တပင်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုက ကိုဏီကိုစာသွားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးသွားတယ်နော် ကောင်းတယ်ဗျာ
ဖြစ်တဲ့နေရာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့ ကိုဏီရေ....
နွယ်ပင်ဆိုပေမဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးကို သူတတ်နိုင်သလောက်
သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်သူနဲ့မှ မနှိုင်းယှဉ်တဲ့ နွယ်ပင်လို ဘ၀မျိုးအားကျတယ်.. သူများကိုလဲ မထိခိုက်စေဘဲ
ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ် အကောင်းဆုံး ရှင်သန်ကြပါစို့
စိတ်ထဲမှာ တခုခုရသွားသလိုပဲ .. အသိလေးတခု ... ဘာမှန်းတော့ မသိလိုက်ဘူး .. ဒါပေမယ့် သိသွားတယ် ....
အစ်ကိုရဲ့ စာတွေကတော့ ရသစာပေတွေမို့လို့လား မသိဘူး ... ကောင်းလိုက်တာဗျာ ...
ကောင်းတယ်၊ ရသစာပေလေးက တကယ်ရသမြောက်တယ်။ အသိတရားတစ်စုံတစ်ရာကိုလည်း စာဖတ်သူရင်ထဲရောက်အောင် သတိပေးထားတယ်။ များများရေးနော်။ လာဖတ်မယ်။
အင်း ... သယ်ရင်းရေ ...
နွယ်ပင်လေးနဲ့ ယှဉ်တဲ့ အသိကို ရေးထားတာ ကောင်းတယ် ...
ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ တစ်ဘက်မှာ သေဆုံးခြင်း ရှိတယ် ...
မသေခင်စပ်ကြားတော့ အကောင်းဆုံး ရပ်တည်ကြရမှာပေါ့ .. နော ...
အတွေးလေးက ကောင်းလိုက်တာ..နွယ်ပင်လေးတစ်ပင်ရဲ့ အသိတရား..
ရှင်သန်ခြင်းကို ဖေါ်သွားတာမိုက်တယ်၊ နွယ်ပီသအောင် နွယ်လိုရှင်သန်နေဦးမှာပဲ၊
ဏီလင်းရဲ့ နွယ်ပင်လေးက ပေးတဲ့အသိလေးကို သဘောကျပါဘိ။
နွယ်ပင်လေးကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ဘလော့ပေါ်တင်ပေးတဲ့ ဏီလင်းကိုလည်း ချီးကျူးပါ၏။
လောကကြီးကပေးတဲ့ နေရာမှာ သေဆုံးခြင်း ကုန်ဆုံးခြင်းတွေ နောက်ထား ရသမျှ အချိန် သူရှင်းသန်ရတယ် . . . အဲဒီအချိန်အတွင်း လောကဓံကိုလည်း သူခံရသလို လေပြေလေညှင်းတွေကိုလည်း သူစံစားရမှာပေါ့ . . . . နွယ် မင်းရဲ့ ဘ၀ဟာ လောကရဲ့ ခဏတာပါပဲ . . . ဒါပေမဲ့ သူပျော်နေလေရဲ့ .....း)
ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတခုအတွက် အသိအမှတ် ပြုသော်ရှိ မပြုသော်ရှိ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေအောင် ၊ ရှင်သန်အောင် ကြိုးစားရပ်တည်ရမှာပဲ ..အားလုံးကို ချုပ်ပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်တာပါ ။
တပင်ထဲ ရင်ထဲက နွယ် ကိုသတိရတယ်
“သေချာတာတစ်ခုကတော့ ငါ့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအရ ဒီနေရာလေးမှာ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့အခြားသောစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့သေဆုံးခြင်းဆိုတာရောက်မလာသေးသရွေ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းရှင်သန်သွားနေဦးရမှာပါပဲကွာ”........
တော်တဲ့သူတွေများ နွယ်ပင်လေး တစ်ပင်ကို အခြေခံပြီးတော့တောင်ဒီလို အက်ဆေးကောင်းကောင်းလေး ရေးတတ်တယ်။ တကယ်အားကျမိပါတယ်။
အတွေးလေးကောင်းတယ်...အဲလို သံဝေဂရစရာလေးတွေများများရေးပေး နို့မို့ဆို လူတွေတော်တော်များများက သိပ်သတိမထားမိကြဘူး...ကိုယ်ပါအပါအ၀င်ပေါ့..အဟဲ..။
သဘောတရား တွေရဲ့ တစ်ဘက်သောစာမျက်နှာက တရာသဘောတွေ
ပေါ်အောင်ရေးထားတာ ချီးကျူးလေးစားပါတယ် ...
ဏီလင်းတို့ဟာလေ...တော်ပြီးရင်းတော်ပဲ...ကောင်းတယ် အရေးရော၊ အတွေးရော....:)
နွယ်ပင်ကပေးတဲ့ အတွေးလေးက လှလိုက်တာ
နွယ်ပင်ကနေ ဆင့်ပွားပြီး ရေးလိုက်တာ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်...
ဟုတ်တယ် ရှောင်ခွင့်မှ မရှိတာ တက်နင်းမှာကို ပူမနေတော့ဘူး
ပျက်သုန်းခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း မရောက်ခင်အထိ ဒီနွယ်ပင်လေးလိုပဲ သူတို့ရဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေ ရဲ့ အဝေးမှာ ရှင်သန်နေရတာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားမှာတော့ မလိုချင်ဘူးကွာ။
ဟုတ်လိုက်လေ အကိုရေ....။ကျရာဘဝမှာ အကို့နွယ်ပင်လေးလို ရှင်သန်နေထိုင်
ရောက်ရာနေရာမှာပျော် ၊ ကျရာနေရာမှာ တော် ( တော် = သင့်တော် ) နေရမှာပေါ့ကွာ။
ကောင်းတယ်ဟေ့. . . ဂွတ်ထပဲ။
( မအားလို့ကွာ အခုမှပဲ လာနိုင်တယ်။ အိပ်ရသေးဘူးဟေ့ )
ကောင်းတယ်ဗျား... လောကမှာ ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုက သူများကို အတိုင်းထက်လွန် အကျိုးမပြုနိုင်သေးပေမဲ့ ဒုက္ခမပေးတာမိတာပဲ တော်လှပါပြီ..
အရာအားလုံးက သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်တည်ကြရတာချည်းပါပဲ ဏီဏီရေ.
အလည်လာသွားပြီနော်။ စီဗုံးးတော့မမြင်လို့ မန့်သွားရတယ်း))